घरजग्गा ब्यवसाय सँगै समाजसेवामा रमाउदै प्रकाश | Chitwan Online Khabar
Posted By: chitwan online khabaron: February 02, 2019 In: चितवन सेरोफेरो
हरि कार्की “लक्की”
एसएलसी दिएर बसेका उनी भर्खर १७ वर्ष टेकेका थिए त्यतिबेला । काम पनि थिएन घरमा । ‘बाबु तुरुन्त आइज मलाई लेखापढीमा सहयोग गर्न,’ मावली हजुरवुवाले बोलाईहाले । तर त्यो निम्तो नै उनको जीवनलाई नयाँ मोडमा ल्याउने घटना बन्यो । अहिले ३६ वर्षको उमेरमा नै करोडौंको मालिक बन्ने आधार बन्यो । चितवन र नवलपुरको झण्डै डेढ दर्जन ठाउंँमा प्लटिङ व्यवसाय चलाउने उनको गैडाकोटमा अत्याधुनिक घर ठडिई सके । खनाल प्लटिङ एण्ड हाउजिङ कम्पनीको सञ्चालक प्रकाश खनालको आर्थिक हैसियत बढ्ने क्रम जारी छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९, मिलनचोकका खनाल यस व्यवसायमा स्थापितनै भैसके ।
चितवनको बसाई भने उनको परिवारको झण्डै ६ दशक पुरानो हो । पुरानो घर तनहुंँ हुदै हजुरबुवासहित २०१७ सालमा उनको परिवार चितवन झरेको थियो । चितवनको भरतपुर, गोन्द्राङ बसोबास गर्न पुगेका उनको परिवार सभ्रान्त परिवारमै गनिन्थ्यो । प्रशस्त जमीन, इटाभट्टा, केही ट्रक, मिनिबस । शुरुमा निकै जमेको थियो उनको परिवारको आर्थिक हैसियत । तर त्यो लामो समयसम्म टिकेन ।
इटाभट्टा घाटामा गयो । ट्रक र मिनीबसमा पनि नोक्सान भयो । आर्थिक हैसियत निकै तल झर्यो । ‘मेरो परिवारलाई त्यो अवस्थामा फर्काउन म प्रयत्नरत छु’ उनी भन्छन । सानैदेखि चलाख र अति मेहनती उनी हजुरबुवाको बाटो पछ्याइरहे लेखापढी तिर । त्यतिबेला उनका हजुरबुबा स्व. मुक्तिरमण वाग्ले मालपोत कार्यलयमा लेखापढी गर्ने चर्चित नाम थियो । उनले हजुरबुवालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढे । साथै पढाइलाई पनि निरन्तरता दिए । बिस्तारै आम्दानी गर्न सफल उनले मालपोतको लेखापढी छाडेर जिल्ला प्रशासन,चितवनको बाहिर लेखापढी गर्न थाले । ‘त्यतिबेला मालपोतको कमाईभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै हुन्थ्यो किनकि त्यहाँ नागरिकता र पासपोर्टको फाराम भर्नेको चाप बढी हुन्थ्यो । म पनि त्यतै तिर लोभिएँ’ उनी सुनाउंँछन । उनमा सबै किसिमको ज्ञान भएर होला त्यहांंँ केही बर्ष काम गरेपछि भने उनको घर अगाडिका तात्कालिन भरतपुर नगरपालिका मेयर गणेश बहादुर थापाले उनलाई कर शाखामा नियुक्त गरे । त्यहाँ पनि उनले ९ महिना मात्र काम गर्न पाए । थापाको कार्यकाल समाप्त भयो ।
त्यसपछि उनलाई अरु हाकिमहरुको अण्डरमा काम गर्न निकै सकस भयो । त्यसपछि नगरपालिकाको गेटबाहिर लेखापढी सेवा खोले । सबैसंग राम्रो व्यवहार र काम गर्न सिपालु उनको लेखापढी फर्ममा भीड हुन थाल्यो । बिहान कलेज पढ्दै अफिस समयमा लेखापढी गर्थे उनी । कामको चाप भएपछि आम्दानी पनि राम्रै हुने नै भयो ।
बिस्तारै कमाएको आम्दानी उनले जग्गा व्यवसायमा लगाउन थाले । यतिबेलासम्म मैले जग्गा अरुलाई मिलाइदिएर पनि थप आम्दानी गर्दै आएको थिएँ,’ उनले थपे । जग्गा व्यवसायीसँगपनि उनको राम्रै हिमचिम हुन्थ्यो । राम्रै आम्दानी हुन थालेपछि भने उनले बिस्तारै जग्गा व्यवसायमा हात हाल्न थाले २०६४ ÷ ६५ साल तिर चितवन बसाइ सराइ गर्ने र जग्गा किन्न आउने ग्राहकको संख्या बढ्नै नै भयो । त्यतिबेला जग्गाको व्यापारले धेरैको जीवनस्तर उकासिएको थियो । कर्म र भाग्यसंँगै उनले मिलनचोक नजिकै साढे १४ कठ्ठा जग्गा किनीहाले । अनि गर्न थाले प्लटिङ ।
त्यतिबेला उनलाई साथ दिए बीरबहादुर कुमालले । उनले कुमालललाई आफ्नो अभिभावक जस्तै मान्थे । पहिलोपटक आफैले गरेको प्लटिङ्गले राम्रै आम्दानी दिन सफल भयो । एकाएक गरेर प्लटिङको घडेरी सहजै बिक्री भए । उनी थप हौसिए । अझ आत्मविश्वास पलायो । त्यसपछि उनले हाउजिङ कम्पनी खोलेर नै व्यवसायलाई गतिदिन थाले । उनको व्यवसाय फष्टाउंँदै गयो । त्यसपछि हालसम्मपनि उनलाई पछि फर्केर हेर्नै परेन । तर २०६८ सालतिरबाट भने जग्गाको बिक्री पनि बिस्तारै सेलाउंँदै गयो । उनको दुर्दशा शुरु हुने स्थितिमा पुग्यो ।
‘जग्गामा गरेको मेरो लगानी चौपटै भयो, यतिसम्मकी म बिरामी पर्दा औषधी खाने पैसा पनि हुन्थेन । उनी भन्दै गए ‘जग्गा बेचौं घाटा खाएर बेच्न खोज्दा पनि बिक्री नहुने, नबेचौं, बैंकको क्रण र जीवन धान्नै गाह्रो ’ । तर उनले हिम्मत हारेनन । धेरैसमय कुर्दापनि जग्गाको भाउ उकालो नलागेपछि उनले दोस्रो विकल्प खोजे , अक्सिजन सिलिण्डरमा ग्यास भरेर अस्पतालमा सप्लाई गर्ने । भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उनका मामा ससुराले काम गर्थे त्यतिबेला । मामा ससुराकै सल्लाहमा उनले अक्सिजन सिलिन्डर बेच्ने काम शुरु गरे । केही महिना बित्न नपाउंँदै त्यहांँपनि उनले घाटा बेहोर्नुपरयो । ‘आफूलाई अनुभव नभएको बिषय ४ महिनामा मै ६ लाख घाटा खाएंँ’ उनले अर्काे तितो अनुभव पोखे । तर युवा जोश र जांँगर उनको कहाँ मरेको थियो र ? ‘जग्गाले फेरी आफ्नो ठाउंँ लेला एकपटक भन्ने आश मनमा मरेकै थिएन’ जग्गाप्रतिको उनको मोह सम्झन्छन । बीचमा फाठ्ठफुट्ट जग्गा बिक्री भइहालेपनि खासै फाइदा भने हुन्थेन । कति साथी त यो व्यवसाय छोडेर गए, कोही विदेश । तर उनलाई विदेश जाने मोहलाई कहिल्यै सताएन । तर उनी अझै सफलताको आशमा बसिरहेका थिए । तर दुःखको कुरा भनौं या संयोग भुकम्पपछि भने उनको व्यवसायले ह्वात्तै गतिलियो । जग्गा किन्न आउनेको संख्या यति बढ्न थाल्यो कि उनले प्लटिङ गरेका सबै जग्गा तुरुन्तै बुक हुन्थ्यो । तर उनले खोजे अनुसारको जग्गा भने पाउनै गाह्रो प्लटिडका लागि । जति व्यापार हुन्छ उनले आम्दानी यसैमा लगानी गर्दै लगे । हाल उनले र गैडाकोटमा समेत आलिसान घर जोड्न सफल भएका छन । आर्थिक सम्पन्नताको उकालो उक्लेका उनी अहिले भने उनी सामाजिक सेवामा पनि उत्तिकै क्रियाशील छन । ‘म पहिल्यैदेखि परोपकारी मान्छे, कमाइको १० प्रतिशत समाजसेवामा खर्चिन्छु’ उनले थपे ।
उनले २५ देखि ३० ठाउंँमा समाजसेवाको लागि लाखौ रुपैयांँ सहयोग गर्दै आएका छन । हाल उनी राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, मोहन माविका सल्लाहकार सदस्य, निलकण्ठ शिव मन्दिरको सल्लाहाकार समेत हुन । हाउजिङ्ग व्यवसाय, समाजसेवा संँगै अध्ययनलाई पनि उनले संँगै निरन्तरता दिने उनको ईच्छा पनि छ । ‘ केही बर्ष अघि मैले बि.बि.एस सकें, अब मास्टर डिग्री गर्ने धोको छ ।’